Ogaden News Agency (ONA) – Waatan sababtii wariyashii reer Sweden ay naftooda halista u galiyeen dawlada Itoobiyana ay rabtay inay qariso.
Waatan sababtii wariyashii reer Sweden ay naftooda halista u galiyeen dawlada Itoobiyana ay rabtay inay qariso.
Wargayska ugu wayn wadankan Sweden ee lagu magacaabo Aftonbladet.se ayaa lagu soo daabacay bogiisa hore maqaal dheer oo aad u xiisa badan soona jiitay in dhaha saxaafada caalamka iyo dadka reer Sweden oo ay caado u tahay in uu qof walba subixii akhriyo wargayska inta uuna u kalihin Shaqadiisa.
Wariyayaal ka socday wargayskan caanka ah ayaa waxay si toos ah uga soo gudbiyeen maqaalkan Xerada QoxootigaKenyaee Dadaab halkaas oo ay ku suganyihiin dad badan oo shacab ah oo ay xukumada Melz Zenawi ay ka soo barakicisay guryahoodi ay ku dhasheen.
Maqaalkan oo wata waraysiyo iyo sawiro naxdin leh waxay wariyayaashu ku soo qaadanayaan dad dhibanayaal ah oo dhamantood ka sheekaynaya dhibka loo gaystay ayaga iyo dhamaan Shacbka Somalida Ogadeniya ee ay ka soo carareen sida Kufsiga, Jidh-dilka, Mirjinta, Dilka aan kala jogsiga lahayn, Xadhiga bilaa sababta ah iyo xadgudubyada baahsan ee Itoobiya ka wado guud ahaan Gobalda Soomalida Ogadeniya.
Hadaba maqaalkan oo koobnaa ilaa 4qaybood oo dhamantood ka hadlayay xasuuqa arxan darada ah ee ay Itoobiya ka wado Ogadeniya ayaa waxaa cinwaan looga dhigay;
(WATAN SABABTII 2 WARIYE EE RER SWEDEN AY NAFTOODA HALISTA U GALIYEEN SI AY U SOO BANDHIGAAN XASUUQA KA SOCDA OGADENIYA EE AY ITOOBIYANA DOONAYSO INAY QARISO).
Waxay wariyayaashu ku soo bandhigayaan maqaalkooda dad la jidh-dilay oo la waraysanaayo qaar xubnohoodi ku wayay xasuuqa shacbka Ogadeniya lagu hayo oo aan waligoodba helin wax hawlo caafimaad ah , waxaa kale oo ay ku soo qaadanayaan dad guryahoodii la gubay qaar laga laayay xolohoodii kuwo beerihii lagala wareegay.
Qaybta labaad ee maqaalka ayaa waxaa ciwaan looga dhigay (JARAAIDKA UGU WAYN WADANKAN SWEDEN OO SI TOOS AH U SOO GUDBINAYA XAQIIQADII DHABTA AHAYD EE ADUUNKU INDHAHA IYO DHAGAHABA KA FURAYSTAY) ayagoo halkaana ku soo qaadanaya in aduunku uu iska idho tirayo dhibatooyinka aan kala joogsiga lahayn ee Itobiya ku hayso Ogadeniya xaaladuna ay hada marayso mel aan indhaha laga daboolan karin wax walbana ay banaanka yimadeen.
Qaybta sedexaadna waxay ciwan uga dhigeen (WAY I GARACEEN WAYNA I KUFSADEEN) ayagoo ku soo qadanaya gabdho iyo hooyooyin inta la kufsaday hadana la jidh-dilay oo ku curyaamay sabataas, kuwo caruurtii laga layay iyo kuwo ayagoo uurka kuwada ilmaha laga soo riday intii caloosha laga galiyay baadka qoriga. Waxayna soo qadanayaan sawiro iyo waraysi toos ah oo qof walba uu arki karo dhibka ku dhacay gabdhahaas dulman.
Qaybta afraad oo loo qoray si faala ah, waxaa ciwaan looga dhigay (XASUUQA KA SOCDA OGADENIYA WAA DABAR GOYN BINI’AADAMNIMO). Wariyayaasha ayaa waxay waraysiga kasoo qaadeen xeryaha qoxootiga eeKenya.
Marka aad maqaalka akhrido qofkii damiir leh indhihiisa ilmo ayaa kasoo daadanaysa. Sawirada waxaa ka muuqda dhaawacyada loo gaystay gabdhaha iyo wiilasha. waxaa ku jira gabdho la kufsaday oo dhaawac xun loo gaystay jidhkooda ,dad gurigooda lagu dhex gubay ehelkoodiina la laayay iyo dad xubnaha jidhkooda la gooyay iyo dad ay ka muuqdaan jidg-dilkii loo gaystay waraysiga dhibbanayaasha waxaa kale oo ka muuqda nolol xumada dadkaasi ku haysata xeryaha qoxootiga iyo xeryaha qoxootigaKenyaoo buux dhaafay.
Maqaalka oo ka kooban saddex bog oo waawayn wuxuu qoraalkiisa kusoo gabagabaynayaa in labada wariye ee iswidhishka ah ee xidhan ay rabeen in ay soo qoraan arrimo noocan oo kale ah, haddana ay u xidhan yihiin sababtoo ah waxay kashifayeen xasuuqa ay itoobiya ka waddo gobolka Ogadeniya,waxaa sidoo kale ku qoran dalabkii dadka la waraystay ee ahaa in caalamku isku dayo inuu joojiyo xasuuqa ka socda gobolka Ogadeeniya iyo in maxkamad lasoo taago dadkii dhibatooyinkan u gaystay dadka la waraystay iyo in shirkadaha shidaalka baadha oo qayb ka ah xasuuqa ay isaga baxaan guud ahaan Dhulka Soomalida Ogadeniya.
Isku soo wada duuboo qadiyada Soomalida Ogadeniya ayaa waxay caan ka noqotay wadamadan Skandinvianka la isku dhoho kadib qafalashadii 2 wariye ee rer Sweden madaama ay wadamadani yihiin kuwo inta badan isku luuqada ah iskuna xidhan dhinac kasta waxayna kentay taasi in malin kasta ay saxafadu so toos ah dood wadaagyo ugu samayso xalada Ogadeniya waxadna arkaysa in malin kasta ay saxaafadu soo radsanayso Jaaliyada iyo Ururka Dhalinyarada OYSU Sweden si ay uga helaan xog dheeraad ah xalada qalafsan ee Ogadeniya.